Nala soo hadal Maanta!
Qalabka mashiinka mashiinka Mareykanka
Qalabka mashiinka loogu talagalay Cummins
matoorrada mashiinka ee diir
matoorrada mashiinka loogu talagalay john deere
matoorrada mashiinka loogu talagalay Detroit
Qalabka mashiinka mashiinka Jarmalka
qalabka mashiinka loogu talagalay Mercedes Benz
Waa Maxay Sababta Dhalinta Mashiinka Mashiinka?
Waa maxay buuqa waalka? Ka dib marka gaariga la bilaabo, matoorku wuxuu sameeyaa "garaac" laxan ah oo la mid ah dhawaqa garaaca birta, kaasoo si dhaqso leh u xawaareynaya markii xawaaraha mashiinku kordho. Xaaladaha caadiga ah, mishiinku ma sameyn doono buuqa noocan ah muddo dheer. Inta badan ...
Maxay yihiin Faa'iidooyinka Nidaamka Waqtiga Kala-beddelka Kala-beddelashada?
Tan iyo markii uu soo baxay matoorka, dadku ma aysan joojin inay horumariyaan isaga, sidoo kale waxaan aragnay jiilal matoorro cusub oo wata barokacyo kala duwan yar iyo weyn. Kordhinta gawaarida, waxaan keenay dhibaato xagga tamarta ah oo aad u xun. , Saliida, oo ah kheyraad aan dib loo cusbooneysiin karin, ayaa si tartiib tartiib ah ...
Sidee loola macaamilaa Fashilka Gawaarida?
Marka mootadu socoto wakhti dheer, mashiinka mashiinka mashiinka ayaa guud ahaan soo muuqan doona, ifafaale aad u weyn ama aad u yar, si loo helo sababta, waxaad u baahan tahay inaad la tashato macluumaad fara badan, shirkad qeybiyaha mootada si ay kuu siiso falanqeyn fudud. Saameynta nadiifinta waalka ee mishiinka La ...
Sidee dib loogu hagaajiyaa Qalabka Mashiinka Baabuurta?
Qaybaha gawaarida gawaarida gawaarida bay'ada shaqadu waa mid qallafsan, xiriir toos ah gaaska, heerkulka ugu sarreeya ee waalka qiiqa ayaa gaari kara 800 ℃, iyo dhamaadka wareegga saliidda, oo ay weheliso shaqada waalka marka falka furitaanka iyo xiritaanka uu soo noqnoqdo, qaybaha waalka waa mid aad u fudud ...
Sidee loo hagaajiyaa Nadiifinta Mashiinka Mootada?
Marka mootada la raaco muddo dheer, mishiinku guud ahaan wuxuu yeelanayaa nadiifinta waalka oo aad u weyn ama aad u yar, aad u weyn ama aad u yar, aad u weyn ama aad u yar. Dad badan oo waxbadan ka ogaada filtarka ayaa laga yaabaa inaanay ka warqabin waxa dhibaatooyinkani sababi karaan, iyo informa ...
Wuji Country, Shijiazhuang City, Gobolka Hebei, Shiinaha
Qalabka mashiinka mashiinka Japan
Qalabka mashiinka mashiinka Kuuriya
Jan-28-2021 Waa Maxay Sababta Dhalinta Mashiinka Mashiinka?
Jan-28-2021 Maxay yihiin Faa'iidooyinka Nidaamka Waqtiga Kala-beddelka Kala-beddelashada?
Jan-28-2021 Sidee loola macaamilaa Fashilka Gawaarida?
Jan-28-2021 Sidee dib loogu hagaajiyaa Qalabka Mashiinka Baabuurta?